Zimbabwe President Robert Mugabe on Wednesday urged political parties to ensure a looming general election is peaceful, amid a rise in violence that he blamed on ambitious politicians staking claims as candidates.
Addressing the rally, Mugabe, 88 years old and Zimbabwe's ruler since independence, also said ZANU-PF would not back down from a highly criticised drive to force foreign firms to surrender majority stakes to locals.
"We have disagreed in this government because there are others who want to perpetuate the old culture of expropriation, looting and self-aggrandisement clad in new and misleading nomenclature such as indigenisation," he said in an independence day statement.
Critics said the "indigenisation" drive is more aimed at filling ZANU-PF coffers ahead of elections than helping the majority of the population who struggle to get by on less than $1 a day.
On Monday, Indigenisation, Youth and Economic Empowerment Minister Saviour Kasukuwere, a ZANU-PF member, told Reuters that Harare expected to finalise the transfer of majority stakes in foreign mining companies to local blacks by the end of April.
Resource-rich Zimbabwe has the world's second largest platinum reserves after neighbouring South Africa, as well as lucrative gold and diamond deposits.